Uyenza njani indoda ithandane kuWhatsApp | Amadoda aseStylish
Uyenza njani indoda ithandane noWhatsApp
UAlicia tomero | 14/11/2021 22:32 | Isibini kunye nokwabelana ngesondo, Te knoloji
I-WhatsApp iye yaba enye yezona networks zisetyenziswa kakhulu kwaye usinika inyhweba yokukwazi ukuqhagamshelana nabantu esisandul’ ukudibana nabo. Ukuba ufuna ukuya phambili kakhulu, esi sicelo ikuvumela ukuba woyise loo mntu ukuba uyathanda kwaye ukwazi ukuba nobudlelwane obufunayo.
Ukuba akunamava amaninzi ekuthumeleni imiyalezo okanye awazi ukuba usabela njani, sinokukunika iingcebiso okanye izitshixo ukuze ukwazi ukusabela. yoyise laa ndoda uyithandayo. Akunyanzelekanga ukuba ube ngumntu owahlukileyo, kodwa kufuneka uzame ukuba ungacengi, uyeke okanye ungakhathali. Nje ukuba ngempumelelo ukuze gcina ibhalansi oyithandayo.
1 Uyenza njani indoda ukuba ithandane noWhatsApp?
1.1 Kuthatha ixesha ukuthumela impendulo
1.2 Ifanele ibe njani imiyalezo?
1.3 Gcina imfihlakalo de udibane buqu
1.4 Kuthekani ngee-emojis?
1.5 Ungaze ubuze iingcaciso
1.6 Yiba nomdla kuye, kodwa ungamkhalimeli
1.7 Bonisa ubuntu bakho njengoko unjalo
Uyenza njani indoda ukuba ithandane noWhatsApp?
Ukuze ukwazi ukuthetha ngesi sicelo kubalulekile yiba nenombolo yefowuni yomnye umntu. Ukubonelela ngenani kuthetha ukuba ekuhambeni kwexesha uhlobo oluthile loqhagamshelwano luya kusekwa, kwaye ubukhulu becala, nge-WhatsApp. Ukuba kunjalo, kungenxa yokuba omnye umntu unomdla kuwe kwaye ngokuqinisekileyo uya kululinda olo hlobo loqhagamshelwano.
Kuthatha ixesha ukuthumela impendulo
Ukuba nguye othathe inyathelo lokuqala lokubhalela, sebenzisa isixhobo esichuliweyo se thatha ixesha lokuphendula. Siyazi ukuba uya kuvuma ukuthetha into, kodwa awukwazi ukubonakala njengomfazi ophelelwe lithemba. Ukuba uyamngenisa inqunyanyiswe ixesha elide, ngokuqinisekileyo ufuna ukufumana ingqalelo yakho kwaye ndikukhangele ngomnye umyalezo.
Ukuba, kwelinye icala, nguwe othumele umyalezo wokuqala, kufuneka uzibonakalise unobubele, kodwa awunamdla. Kufuneka uqaphele ukuba awungomfazi ozinikele kakhulu okokuqala kwaye awulindanga imini yonke ukuze ubone imiyalezo yabo.
Ifanele ibe njani imiyalezo?
Imiyalezo kufuneka ibe ngokucacileyo kwaye onwabile. Musa ukugqithisa ngeenkcazo ezinde kakhulu, amadoda awathandi ukufunda into ende kakhulu. Unokufumana ingqalelo yabo ngokubhala izivakalisi ezifutshane, ukuba banemvelaphi yaye bayathandeka xa bezifunda. Ukuchukumisa okuhlekisayo kunye nomdlalo omncinci ohlekisayo naye uya kumkholisa kakhulu.
Bathanda ukuba nencoko emnandi, asikuko ukuba ubaxelele indlela oluhambe ngayo usuku lwakho kwaye ungasuki entliziyweni. Ezona zingcono zezo imiyalezo ezenzekelayo kunye neqhelekileyo kwaye ulumke ngokuthumela iimemes okanye iividiyo ezihlekisayo, mhlawumbi akakabuqondi uburharha bakho.
Gcina imfihlakalo de udibane buqu
Musa ukunika izitshixo ezininzi zokuba unjani, okanye uthumele iifoto ukuba uzicelile. Nangakumbi xa ekucela ukuba uzilolonge thumela ngeposi, ekubeni into ayifunayo kukuphakamisa i-ego yakhe ngefoto yomzimba wakho oze. Ukuba awunakuzithemba kakhulu ungaweli kuqheliselo lokuthumela iifoto ukuba akumazi ngenene. Awusoze wazi ukuba ungawusebenzisa njani umfanekiso wakho kwimidiya yoluntu.
Ziyimiboniso yeemvakalelo zethu kunye ziyonwabisa kwaye ziyasebenza. Kodwa ungawasebenzisi kakhulu, oko kunokunika imvakalelo yobuntwana. Gcina enye ngamaxesha ukuze isivakalisi singabi buthuntu xa usibhala. IiEmojis nceda ukuvakalisa imvakalelo yelo binzana ubulihambisa, kodwa ngendlela ethile kuphela.
Ungaze ubuze iingcaciso
Ukuba ibuhlungu into yokuba ithatha ixesha ukuyiphendula okanye ayigqibi ukubhalelana nemiyalezo, musa ukuphelelwa lithemba. Gcina ukuma kwakho ekulindile kwaye ungambethi ngemiyalezo ukukunika iingcaciso. Amadoda amaninzi athatha ixesha lokusabela, kwaye umfazi ongxamile unokukoyisa. Ucinga ukuba uhleli nawe okanye udlala ngeemvakalelo zakho? Xa uthandabuza Sukuba nexhala, linda uze uzole. Kuphela ziinkcukacha eziya kukunika uhlobo lomntu alulo kunye neenjongo abonisa ngazo uthando lwakhe.
Yiba nomdla kuye, kodwa ungamkhalimeli
Sonke siyathanda ukuphulaphulwa nokuba zihlobene neemvakalelo zethu. Amadoda anokuba nomdla ngakumbi xa kuziwa ekuchazeni imihla ngemihla, okanye indlela avakalelwa ngayo, ngakumbi xa kungekho kuzithemba kungako. Ukuba ufuna ukukuxelela into, mphulaphule, baba nombulelo gqitha xa kukho ibhinqa elibancedayo libacebise.
Bonisa ubuntu bakho njengoko unjalo
Oku kuhlala kuyingcebiso echazwe kuyo yonke isiqalo somtsalane omncinci okanye umdla. Sukuzenza olunye uhlobo lomntu kuba ekugqibeleni inokufunyanwa. Fumana eyona nguqulo yakho ilungileyo kwaye umchukumise kancinci kancinci, ubuncinci kude kube ngumhla wakho wokuqala. Okufanayo kuya kwiifoto, ungazami ukoyisa ngefoto ehlaziyiweyo, zibonise njengendalo njengoko unakho.
Kwaye ngaphezu kwako konke funda ukuvalelisa kwaye uthi ndlela-ntle ukuba awubonisi mdla ungako. Sukuqhubeka uzama ukukhangela into engangcangcazeli kwicala elinye, mhlawumbi yindoda ebifuna umntu wokuyigquma. ukusilela ngokweemvakalelo kunye nokwandisa i-ego yakho. Ngoko ke, kufuneka uhlukanise ezi ngcamango ukuze unganiki yonke into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Uyenza njani indoda ithandane noWhatsApp
Indlela yokugqoka kwisitayela
Indlela yokwazi ukuba indoda idiniwe nguwe